Iibiyaha ugu fiican ee xalalka nalka hogaaminta | Huayi Iftiin
Guriga > Xalka
Sida xirfad bixiyaha xallinta iftiinka iftiinka, Huayi Lighting wuxuu had iyo jeer raacay xeerarka jaangooyooyinka si loo fuliyo hababka wax soo saarka adag si loo hubiyo tayada alaabta, sidaas awgeed wakhtiga iyo kharashka labadaba labadaba iyo keenaya faa'iidooyinka ugu weyn ee macaamiisha.Huayi Lighting waxay bixisaa qiimo jaban. adeega xalinta hal joogsiga laga bilaabo nakhshad horudhac ah, qaabaynta nidaamka ilaa rakibida iyo dayactirka.
Khibrad midho leh iyo badeecooyin bislaaday ayaa ah sababo muhiim ah oo Huayi u awooday in uu ka soo baxo mashruucyo badan oo nalal dhismeed oo dalbanaya sannadihii la soo dhaafay. Waxaan si dhow ula shaqeynaa horumariyaha iyo naqshadeeye si aan u doorano xalka iftiinka saxda ah ee ku habboon mashruucyadooda.
Hal iftiin ayaa noqon kara calaamad magaalo oo hal dhismo ah iyada oo loo marayo waxqabadka sare ee adeegga, xasiloonida iyo isku halaynta alaabta, oo lagu daro naqshadaynta xirfadlayaasha ah, run ahaantii waxay ka dhigi kartaa dhismaha mid aad u qurux badan oo leh badbaado iyo hufnaan tamar.
Ka dib in ka badan 30 sano oo ururinta tignoolajiyada, xalalka la habeeyey ayaa noqday faa'iidada muhiimka ah ee Huayi, waxay abuurtay mashaariic badan oo la yaab leh oo iftiin leh oo ku saabsan mawduuca habeynta.
Huayi waxay tixgalinaysaa ficil ahaan iyadoo dhagaysanaysa oo fahmaysa baahiyaha macmiilka oo ay doonayso inay raacdo dhamaystirka ugu dambeeya ee mashaariicda. Waxaan si wadajir ah ula shaqeyneynaa ruuxa daacadda ah iyo xirfadda si aan uga dhigno qorshahaaga mashruuc mid gaar ah oo xirfad leh waxqabadkiisa.